काठमाडौंमा ४९ हजार मत गन्न बाँकी, अहिलेसम्म कसकाे मत कति ? (ताजा अपडेट)
May 23, 2022 N88LeaveaComment on काठमाडौंमा ४९ हजार मत गन्न बाँकी, अहिलेसम्म कसकाे मत कति ? (ताजा अपडेट)
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकामा एक लाख ४२ हजार ९० मतको गणना सकिएको छ । सोमबार राति १० बजेसम्म मेयरका स्वतन्त्र उमेदवार बालेन शाहले ४८ हजार ८९ मत पाएका छन् । दोस्रो स्थानकी नेपाली कांग्रेसकी सिर्जना सिंहले २९ हजार १८० मत प्राप्त गरेकी छन् । उनलाई पछ्याइरहेका एमालेका केशव स्थापितले २८ हजार ३२६ मत पाएका छन् । […]
भरतपुरको मेयरमा अत्यधिक मतसहित रेणु दाहाल पुनः निर्वाचित
May 23, 2022 N88LeaveaComment on भरतपुरको मेयरमा अत्यधिक मतसहित रेणु दाहाल पुनः निर्वाचित
चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी उम्मेदवार रेणु दाहाल पुनः निर्वाचित भएकी छिन् । भरतपुरमा ११ हजार १७३ मत गणना गर्न बाँकी हुँदा दाहाल विजयी भएकी हुन् । कुल खसेको मत १ लाख २७ हजार ८३९ मध्ये १ लाख १६ हजार ६६६ गणना भइसकेको छ । जसमध्ये रेणु दाहालले ४७ हजार ४० मत प्राप्त […]
May 23, 2022 N88LeaveaComment on काठमाडाैं अपडेट : केशव स्थापितले जसमाथि गरे आशा, उसैले बनायो निराश (मतसहित)
काठमाडाैं । काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर पदका स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहले आफ्ना प्रतिस्पर्धीसँग झन्डै १९ हजार मतान्तर बनाएका छन्। उनी नेपाली कांग्रेसकी उम्मेदवार सिर्जना सिंहभन्दा झन्डै १९ हजार मतले अगाडि छन्। सिंह काठमाडौंको मेयरको दौडमा दोस्रो स्थानमा छिन्। मतगणनाको सुरूदेखि नै अग्रता लिएका शाहले अहिले सिंहसँग १८ हजार ९ सय २३ मतान्तर बनाइसकेका छन्। काठमाडौंको राष्ट्रियसभा गृहस्थित […]
जे बर मागे पनि पूरा हुने सुपादेउराली मन्दिरकाे दर्शन गरी हेर्नुस् जेठ १० गते मंगलबारकाे राशिफल
May 23, 2022 N88LeaveaComment on जे बर मागे पनि पूरा हुने सुपादेउराली मन्दिरकाे दर्शन गरी हेर्नुस् जेठ १० गते मंगलबारकाे राशिफल
मेष राशि : कडा परिश्रमले फल दिनेछ। सामाजिक कार्यमा मन लाग्नेछ । सम्मान मिल्नेछ । व्यापार व्यावसायमा मनग्य लाभ मिल्नेछ । प्रभावशाली व्यक्तिसँग भेटघाट बढ्नेछ। शारीरिक पीडा हुने सम्भावना छ । चिन्ता र तनाव रहनेछ। रोचक यात्राको योजना बन्नेछ । खराब मानिसहरूबाट टाढा रहनुहोस्। वृष राशि : तपाईले टाढाबाट सुखद जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। घरमा […]
May 23, 2022 N88LeaveaComment on जनकपुरधामको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मदेवार मनोज साह निर्वाचित
जनकपुरधाम । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार मनोजकुमार साह निर्वाचित भएका छन । स्वतन्त्र उम्मेदवार साह १३ हजार ४ सय ६५ मत ल्याउँदै मेयरमा निर्वाचित भएका हुन् । उनका निकटतमा प्रतिद्वन्द्वी नेकपा एमालेका शिवशंकर साह हिराले ९ हजार ५ सय ३२ मत ल्याए । मनोज ३ हजार ९ सय ३३ मतान्तरले विजयी भएका हुन् । […]
सवारी लाइसेन्सकाे ट्रायल दिनेहरूका लागि खुशीकाे खबर
May 23, 2022 N88LeaveaComment on सवारी लाइसेन्सकाे ट्रायल दिनेहरूका लागि खुशीकाे खबर
काठमाडौँ । चालक अनुमतिपत्रको परीक्षाका लागि वषौँ कुरेर पनि कार्यालयले भनेकै दिनमा दिनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले विगतका बाँकी परीक्षा सकिएपछि सेवाग्राहीले छानेको दिन र फारम भरेको केही दिनमा परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था मिलाउने तयारी अघि बढाएको छ । चालक अनुमतिपत्रको परीक्षाका लागि सेवाग्राहीले आफ्नो अनुकूलको दिन छान्न सक्ने व्यवस्था […]
May 23, 2022 May 23, 2022 N88LeaveaComment on भरतपुर अपडेट : १ लाख ११ हजार मतगणना, रेनुले बढाइन् यति धेरै मतान्तर
चितवन । स्थानीय तह निर्वाचनअन्तर्गत चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा मतगणना जारी छ । अहिलेसम्म १ लाख ११ हजार २७३ मतगणना सम्पन्न भएको छ । जारी गणनामा माओवादी केन्द्रकी रेनु दाहालले ४४ हजार ७१० मत प्राप्त गरेकी छन् । एमालेका विजय सुवेदीले ३४ हजार ३९६ मत प्राप्त गरेका छन् । जगन्नाथ पौडेलले १३ हजार ६१३ मत प्राप्त गरेका […]
सर्लाहीको बरहथवामा एमाले विजयी, गठबन्धन पराजित
May 23, 2022 N88LeaveaComment on सर्लाहीको बरहथवामा एमाले विजयी, गठबन्धन पराजित
सर्लाही । सर्लाहीको बरहथवा नगरपालिकाको मेयरमा नेकपा एमालेकी कल्पना कुमारी कटुवाल निर्वाचित भएकी छन् । कटुवाल बरहथवाका निवर्तमान नगरप्रमुख देवानन्द महतोलाई दोब्बर बढी मतले पराजित गर्दै मेयरमा निर्वाचित भएकी हुन् । उनले १२ हजार २७३ मत प्राप्त गरेकी छन् । उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा माओवादी केन्द्रका महतोले ६ हजार ६६६ मत पाएका छन् । कटुवाल […]